Khilaaf dhaqaale oo la sheegay in uu soo kala dhex galay labada Shariif ee ugu sareysa Ibahaysiga Asmara iyo qaar ka tirsan golaha wasiirada oo ka cabanaya in howshooda ay dadkale wadaan. Ruunkinet 24/02/08
Warar aan la xaqiijin oo ka imaanaya qaar ka tirsan mas'uuliyiita Isbahaysiga dib u xureynta ee magaalada Casmara ayaa ku waramaya in khilaaf weyn soo kala dhex galay Sheekh Shariif iyo Shariif Sheekh Adan oo ah labada nin ee ugu sareysa isbahaysiga dib u xureynta ee dhawaan lagu aasaasay magaalada Casmara.
Khilaafka labada mas'uul ayaa la sheegay in uu ku saleysan yahay dhaqaale loogu tala galay isbahaysiga oo ah mucaawino ay ka heleen dalal iyo shaqsihaad.
Dhanka kale, warar lagu kalsoon yahay oo ka imaanaya mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaliya ayaa sheegay in qaar ka tirsan goloha wasiirada ay ka cabanayaan howshooda oo ay qabanayaan mas'uuliyiin kale.
Howlaha ay ka cabanayaan mas'uuliyiintan ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin how gallada qaar ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiyaanka ah ay ka sameynayaan magaalada Muqdisho iyo meelo kale.
Warka ayaa intaasi ku daraya in ay ka cabanayaa mas'uuliyiintan in weeeraro ay qaadaan ciidamda dowladda ayagoon la ogeysiin ayna ka dhageystaa idaacadaha dibadda iyo kuwa gudaha howl gallada ka socoda goobo ka mid ah magaalada Muqdisho.